PrivacyTools - Online Privacy အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးဝင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက် | Linux မှ
မနေ့ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည် "Awesome Open Source" အဘယ်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်တစ် ဦး အလွနှင့်ကြီးမားသောကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Applications ကို Catalogယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဆင်တူသောအခြားအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေမည်ဖြစ်သော်လည်းတိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်သည် အွန်လိုင်း privacy နိုင်ငံသားအားလုံး၏အမည်မှာ PrivacyTools များ.
PrivacyTools များ သည်အဖိုးတန်။ အသုံးဝင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည် အွန်လိုင်း privacyအကျိုးကျေးဇူးများစွာအနက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုကာကွယ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကိရိယာများနှင့်ဗဟုသုတများကိုပေးသည် privacy ကို ဆန့်ကျင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်။
NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်အပြည့်အဝမဝင်ခင် PrivacyTools များသတိပြုသင့်သည်မှာအခြားအချိန်အခါများကဲ့သို့သောအခြားအလားတူဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးသည် NoGAFAMအောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ယခင်ထုတ်ဝေမှာဖော်ပြထားတဲ့:
"NoGAFAM သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတိုးမြှင့်ရုံသာမကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်ထားသောအချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Technological Giants ၏ပလက်ဖောင်းများ၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခြားသူများကိုလည်းသတိပြုမိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသော site တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာ၏ GAFAM အဖြစ်လူသိများကြသည်". NoGAFAM - အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့်လှုပ်ရှားမှု
အခြားနေစဉ် ယခင်ဆက်စပ် postပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
လူမှုကွန်ယက်များအကြပ်အတည်း - Operating Systems တွင်ရှိပါသလား။
ငါတို့သည်လည်းများစွာသောအခြားသူများနှင့်လင့်များရှိရာ ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ၏အတိုင်းအတာနှင့်အတူ:
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် GAFAM - ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာ
1 PrivacyTools - အွန်လိုင်း privacy အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်
1.1 PrivacyTools ကဘာလဲ?
PrivacyTools - အွန်လိုင်း privacy အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်
သင့်ကိုယ်ပိုင်အရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"မင်းကြည့်နေတယ် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကွန်ယက်ပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်သည်။ privacytools-en သည်သင်၏ privacy ကိုအသုံးပြုသူများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာခံမှုကိုကာကွယ်ရန်အသိပညာနှင့်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်တိုးတက်မှုအသစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်ကဲ့သို့သင်နှင့်တူသောသီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိနေသည့်လူအများစုကိုကျွန်ုပ်တို့အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကကျသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်အကြံပြုရန်ဖြစ်သည်။"
၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်ခိုင်မာသော၊
သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ privacy ပညာရေးကိုပျံ့နှံ့စေရန်နှင့် Mastodon, Matrix နှင့် WriteFreely ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်များစွာသောအရာများထဲမှ၎င်း၏အကြံပြုချက်များကိုပေးသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနှစ်သက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများ, tools များနှင့်အသိပညာ ၏ကိစ္စရပ်များအတွက် အွန်လိုင်း privacyသို့သူတို့ကိုငါခွဲဝေ5အမျိုးအစား ဘယ်ဟာတွေလဲ
Web browser များ
၎င်း၏ interface ကို၌တည်ရှိ၏ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်အဲဒါရှိတယ် မှန် site ကို en စပိန်ဘာသာစကားလာမယ့်ခုနှစ်တွင် link ကို။ ယခုမှစ။ ၏လယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောအသိပညာ၏အားသာချက်ယူဤ website ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှာဖွေရေးရှိပါတယ် အွန်လိုင်း privacy ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာရန်အကြံပြုလိုပါသည် ဆက်စပ်လင့်ခ်များ ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောareaရိယာ၌ငါတို့၏အသိပညာကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန် အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေး နှင့် / သို့မဟုတ် အိုင်တီလုံခြုံရေး:
ဒေတာကာကွယ်မှုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း (သို့မဟုတ်) စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်မှုအရင်းရှင်စနစ်ဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «PrivacyTools»၎င်းအတွက်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးဝင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက် အွန်လိုင်း privacyအကျိုးကျေးဇူးများစွာအနက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုကာကွယ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကိရိယာများနှင့်ဗဟုသုတများကိုပေးသည် privacy ကို ဆန့်ကျင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင့်ကြည့်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » PrivacyTools - အွန်လိုင်း privacy အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးဝင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်
HumHub ၁.၇.၁ - ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်လူမှုကွန်ယက် SW ၏မူကွဲအသစ်
ဝက်ဘ်၏ဖခင် Tim Berners-Lee သည်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည်